နေ့လည်ဘက် တရေးအိပ်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော ကျန်းမာရေးကောင်းကျိူးများ - XYZ NEWS
နေ့လည်ဘက် တရေးအိပ်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော ကျန်းမာရေးကောင်းကျိူးများ
အချိူ့နိုင်ငံများရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအရ တရေးအိပ်တာဟာ ငပျင်းတို့အလုပ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ။နေ့လည်တစ်ရေးအိပ်ခြင်းကြောင့်အားအင်ပြည့်ဝစေပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်အကျိူးရှိစေတယ်ဆိုတာ သိပ္ပံပညာရှင်များကိုယ်တိုင် လက်ခံထားကြပါတယ်။
(၁) ၁၀မိနစ်ကနေ၂၀မိနစ်ခန့် တရေးအိပ်ခြင်း-တဖန်နိုးကြားတက်ကြွစေတယ်
ပညာရှင်တို့ရဲ့ယူဆချက်အရ နေ့လည်ဘက် ၁၀မိနစ်ကနေ၂၀မိနစ်ခန့် အိပ်စက်ခြင်းဖြင့် အားအင်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းသလိုဖြစ်စေပါတယ်။သင့်ကိုတဖန်ပြန်လည်နိုးကြားစေဖို့နဲ့ စွမ်းအင်မြင့်တက်စေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ထိုသို့ ခဏတာအိပ်စက်လိုက်ခြင်းဖြင့် ငိုက်မျဉ်းနေပြီးအလုပ်ဆက် မလုပ်နိုင်တော့တာမျိူးကို ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။နေ့လည် ၃နာရီကနေ၄နာရီအချိန်တွင် တရေးအိပ်ခြင်းဖြင့် သရေစာများကိုစားမိခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်သလို စိ်တ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများထွက်ခြင်းကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်တာကြောင့် သင့်ကိုယ်အလေးချိန်တက်မလာအောင် ထိမ်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။
နေ့လည်ဘက်တွင် နာရီဝက်လောက်အိပ်စက်တာဟာ ပြန်မထချင်လောက်အောင် ဆက်အိပ်နေချင်အောင် စွမ်းဆောင်နို်င်ပါတယ်။ ထိုသို့နာရီဝက်တရေးအိပ်ခြင်းဖြင့် မှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေခြင်း၊စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျခြင်း၊အလုပ်ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်နိုင်ခြင်း၊သတိမေ့ခြင်းကိုသက်သာစေခြင်းနှင့်ဆီးချိူရောဂါဖြစ်ခြင်းကိုနည်းပါးစေခြင်း စသောကောင်းကျိူးများကိုရရှိစေပါတယ်။ တစ်နေ့တာအိပ်စက်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့ နေ့လည်အချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ခနာက နိုးထပြီး ရနာရီလောက်ဆို ပြန်အားဖြည့်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
တကယ်လို့ သင့်အလုပ်ဟာ တွေးတောကြံဆခြင်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပါက နေ့လည်၁နာရီလောက်အိပ်စက်ခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ်မယ်။၁နာရီဟာ လုံလောက်သော တရေးတမောအိပ်စက်မှုကိုပေးနိုင်တာမို့ သင့်ဦးနှောက်ကိုခဏတာအနားပေးသလိုဖြစ်ပြီး တီထွင်ဉာဏ်စွမ်းကို ပိုမြင့်တက်စေဖို့ကူညီပေးမှာပါ။ထို့ပြင် စိတ်တိုခြင်း စိတ်ဖိစီးခြင်းများကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဆိုးကျိူးအနေနဲ့ကတော့ တစ်နာရီလောက်တရေးအိပ်ခြင်းဖြင့် ခေါင်းမကြည်ပဲ နိုးထတတ်တာမို့ ပြန်လည်လန်းဆန်းအောင် ပြုလုပ်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့။
ဒါကတော့ တရေးအိပ်ရုံသာမက အပြည့်အဝအိပ်ခြင်းအဆင့်ကိုတောင်ရောက်နေပါပြီ။ င်္ဒအဆင့်မှာဆို အိမ်မက်တွေတောင် မက်နေနိုင်ပါပြီ။အိပ်စက်ခြင်းပညာရှင် Dr Sara Mednick ရဲ့အဆိုအရ ၁နာရီခွဲအိပ်စက်ခြင်းဖြင့် စိတ်ကောကိုယ်ပါကျန်းမာစေပြီး မှတ်ဉာဏ်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။တီထွင်ကြံဆမှုတွေလဲ ကောင်းမွန်စေမှာပါ။ ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ အိပ်ရေးဝတာမို့ နိုးလာချိန်မှာ ခေါင်းမကြည်ဖြစ်ခြင်းမျိူး နည်းပါးပါတယ်။
ကဲ နေ့လည် တရေးအိပ်ဖို့ မမေ့ကြနဲ့နော်
There are many agencies out there that will have the ability to supply you with everything that
The reason they are important is because they also supply you with the ability to communicate,
They may just have limited resources and onlyacouple of people that are useful reference trained to help you.
speak, and comprehend the issues which you’re working on at exactly the identical time demonstrate that you are paying attention to the facts and will assist you inasignificant way in having the ability to focus on the important things in life.
you want in this regard.
able to have the ideal paper if you opt for the right research paper service.